Telefoonka gacanta ee Asus ROG Phone 3 waxaa lagu soo saaray 144 Hz panel | Androidsis
Asus ROG Telefoon 3, mobiil kale oo cusub oo ciyaare ah ayaa horeyba loogu bilaabay shaashad 144 Hz iyo Snapdragon 865 Plus
Kadib markii aan la kulmay Lenovo Legion Phone Duel, ciyaartiisii ​​ugu horeysay ee mobilada, hadda waxaan soo bandhigeynaa Asus ROG Telefoonka 3, Terminal la wadaaga astaamo iyo sifooyin farsamo oo fara badan mobilka aan soo sheegnay isla markaana la yimaada kuwa ugu fiican kan ugu fiican si loo bixiyo waxqabad aan la qiyaasi karin.
Terminalkan waxaa la shaaciyey todobaad uun ka hor, sidaa darteed waxaan horeyba u ogayn inuu imanayo hadda. Sababtoo ah waxaa sii daayay shirkadda Shiinaha saacado yar ka hor, ma jiraan wax ka harsan in laga ogaado terminaalkan weyn. Wax walba oo arrintan ku saabsan ayaa lagu faahfaahiyay hoos.
1 Asus ROG Telefoonka 3 iyo astaamaha farsamada
Asus ROG Telefoonka 3 iyo astaamaha farsamada
ROG cusub ee 3 waa terminal lagu muujiyo jaleecada hore sida mid loogu talagalay ciyaaraha. Haddii aan ku bilowno inaan iftiimino qormadeeda dambe, waxaan aragnaa taas Tani waxay hirgelinaysaa nalalka RGB ee astaanta Jamhuuriyadda Ciyaaraha (ROG), wax ku sifoobay mobilada ciyaaraha waxqabadka sare. Dabcan, halkan waxaan sidoo kale ka heleynaa kamarad kamarad ah, xaaladdan oo kale, saddex-jibaar ah oo leh Sony IMX686 64 MP (f / 1.8) dareeraha ugu weyn, 13 MP (f / 2.4) lens lens-ballaaran oo leh aagga 125 ° u fiirso sawirro ballaaran iyo 5 MP (f / 2.0) heersare ah oo loogu talagalay sawirrada makro.
Marka loo eego xagga hore, waxaa jira looxyo iftiin ah oo xoogaa ka sii dhumuc weyn xagga sare iyo hoose, kuwaas oo haya shaashad tiknoolajiyad ah oo ah 6.59-inch shaashad AMOLED ah oo leh FullHD + qaraar iyo heer cusbooneysiin heerkeedu sarreeyo oo ah 144 Hz si qibrad leh oo khibrad u leh isticmaalaha. Jawaabta taabashada ah ee guddigani farta ku fiiqay waa 25 ms (milliseconds), waxaa xusid mudan. Waxay kaloo leedahay muraayad Corning Gorilla Glass 6, HDR10 + teknolojiyad ah, taageerada DCI-P3 iyo 1.000.000: 1 isbarbardhig.
Dareeraha kamaradda hore waa 24 megapixels, halka sidoo kale ay jiraan laba dekedo USB-C ah, oo mid ka mid ah uu ku yaal dhinaca iyo wuxuu la jaan qaadayaa DisplayPort 1.4, oo ah wax kuu ogolaanaya inaad sawir ku dhex dirto xalka 4K, haddii ay dhacdo inaad rabto inaad ku xirto moobilkaaga kormeere dibadeed ama qalab kale.
Asus ROG Phone 3, dhinaca kale, wuxuu adeegsadaa laba kuhadal sitikoyo leh Dirac HD oo loogu talagalay dhawaqa sare (HD) dhawaqa iyo hal NXP TFA9874 laba kordhiyo smart ah, Dual 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NFC chip oo loogu talagalay lacagaha aan lala xiriirin karin iyo isku xirnaanta degdegga ah. Mobilada ciyaaruhu sidoo kale waxay la jaan qaadayaan Qualcomm aptX Adaptive, kaas oo awood u siinaya isku xirnaanta wanaagsan ee qalabka maqalka iyo, sidaa darteed, codka soosaarka sifiican.
Dabcan, waxay la timaadaa Android 10, isdhexgal ku daboolan ROG UI, lakabka u gaarka ah qaabeynta astaamaha ee leh shaqooyinka ciyaaraha sare. Mana iloobi karno taas Terminalkani wuxuu la yimaadaa nidaam qaboojiye ah oo loo yaqaan GameCool 3. ROG Telefoonka 3 sidoo kale waa qaab, sidaas darteed qalabyada iyo aaladaha dibedda ayaa lagu xidhi karaa si kor loogu qaado khibradda ciyaaraha.
Qalabkan ayaa lagu dhawaaqay laguna sii daayay sadex nooc oo kala ah RAM iyo ROM iyo hal nooc oo midabab kala duwan ah, kaas oo ah madow, qiimaha hoos ku xusan, kuwaas oo ah kuwa aan hoos ku muujineyno:
ASUS ROG Telefoonka 3 Strix Edition oo leh 8 / 256GB: 799 euros
ASUS ROG Telefoonka 3 oo leh 12 / 256GB: 999 euros
ASUS ROG Telefoonka 3 oo leh 16 / 512GB: 1.099 euros
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Asus ROG Telefoon 3, mobiil kale oo cusub oo ciyaare ah ayaa horeyba loogu bilaabay shaashad 144 Hz iyo Snapdragon 865 Plus
Sawirka koowaad ee Galaxy Fold 2 oo xaqiijinaya warar dhowr ah